China Precision CNC Machining ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ - Youlin
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > CNC > CNC Machining > CNC Machining တိကျမှု
OEM Precision CNC Machining ပေးသွင်းသူများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် China Precision CNC Machining အတွက် ထုတ်လုပ်သူအတွက် နှစ်စဉ် တိုးတက်မှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကို စျေးကွက်သို့ မိတ်ဆက်ပြီး နှစ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းသည် "ဒီဇယ်အင်ဂျင်တာဘိုနည်းပညာဆိုင်ရာ အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း" ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R&D အဖွဲ့နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော စမ်းသပ်မှု စက်ရုံကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
China Precision CNC Machining အတွက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဖောက်သည်များ၏ ယုံကြည်မှုကို ရရှိထားသော "အရည်အသွေး၊ ရိုးသားမှုနှင့် Customer ဦးစွာပထမ" ၏ လုပ်ငန်းနိယာမအပေါ် အမြဲတစေ တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကို စိတ်ဝင်စားပါက၊ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် မတွန့်ဆုတ်သင့်ပါ။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ တိကျသော CNC Machining စွမ်းရည်များ
Youlin သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တင်းကျပ်စွာ သည်းခံနိုင်မှု၊ မြင့်မားသော တိကျသော CNC Machining တွင် အထူးပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များ၏ ဒီဇိုင်းများမှ လုပ်ဆောင်ပြီး အဆင့်မြင့် CNC စက်နှင့် အလှည့်ကျ နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်၊ အနီးကပ် သည်းခံနိုင်သော ရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းများကို ကျယ်ပြန့်သော ပစ္စည်းများမှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မော်တော်ယာဥ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် လူသုံးကုန်လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သောစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများစွာအတွက် တိကျသေချာသော CNC Machining ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။ Volume သည် မည်သည့်အခါမျှ ပြဿနာမဟုတ်ပါ၊ မြင့်မားသောနှင့် စွမ်းရည်နိမ့်သော ထုတ်လုပ်မှုများသည် အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောတိကျမှုနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုဖြင့် အရှုပ်ထွေးဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုပင် ပေးပို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။
2. တိကျသော CNC Machining အားသာချက်များ
Precision CNC Machining ၏ အဓိက အားသာချက်များတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုစရိတ်စကများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်အတူ ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှုပါဝင်သည်။ တိကျသေချာသော CNC Machining သည် လူသားအမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်ချေကို များစွာဖယ်ရှားပေးသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အပြည့်အဝတီထွင်ထားသောနည်းပညာဖြစ်သောကြောင့် အလုံးစုံတိကျမှုအတိုင်းအတာကို မြှင့်တင်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အော်ပရေတာများထံမှ အချိန်လွတ်ပေးခြင်းဖြင့်၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်များကို အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီကြောင်း သေချာစေမည့် ပရောဂျက်ကြီးကြပ်မှုကို ပေးဆောင်ရန် အာရုံစိုက်နိုင်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်များ လျှော့ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Precision CNC Machining သည် ကျွမ်းကျင်သော အော်ပရေတာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရုံသာမက အလုံးစုံ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။
Precision CNC Machining ၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာ CNC ပုံစံတူရိုက်ခြင်းမှ စကေးအပြည့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအထိ အလုပ်အသွားအလာများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုံတူရိုက်ခြင်းအဆင့်တွင်၊ CNC စက်များသည် developer များအား စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် functional ဒီဇိုင်းများကို လျင်မြန်စွာတည်ဆောက်နိုင်စေပါသည်။ ထို့နောက်၊ စျေးကွက်တွင်ဝယ်လိုအားတစ်ခုတည်ဆောက်သောအခါ၊ CNC စက်သည် အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီတွင်၊ လှည့်ပတ်မှုအချိန်များကို သိသာစွာလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လွတ်သွားသောအခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်စေပါသည်။
3. သတ္တုများ၊ သတ္တုစပ်များတွင် တိကျသော CNC Machining
Youlin ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အဆင့်မြင့် CNC နည်းပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျယ်ပြန့်သော သတ္တုအမျိုးမျိုးမှ မြင့်မားသောတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။ သင်သည် စံချိန်မီ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးဝါ၊ နှင့် သံမဏိများ၊ သို့မဟုတ် တန်စတင်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်ကဲ့သို့သော အထူးသတ္တုစပ်များ လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ သင့်ထုတ်ကုန်များ လိုအပ်သည့် တင်းကျပ်သောခံနိုင်ရည်နှင့် သာလွန်တိကျမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
ပလပ်စတစ်သည် ၎င်း၏ ခိုင်ခံ့သော သံချေးတက်မှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ ရေစိုခံမှု၊ ပေါ့ပါးမှု၊ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပြီး ပြုပြင်ရလွယ်ကူသောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ABS âœ”Acetal [Delrin]၊ Acrylic G-10 Garolite ”နိုင်လွန် ၆/၆ âœ”PEEK "ပိုလီကာဗွန်နိတ် PTFE [Teflon] ပိုလီပပလင်း
မေး- CNC စက်နှင့် တိကျစွာ ပြုပြင်ခြင်းအကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
A: အဲဒါက နာမည်ထဲမှာ တကယ်ရှိတယ်။ တိကျသော စက်ယန္တရားသည် ပိုမိုမြင့်မားသော စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
â—† CNC စက်တစ်ခု၏သည်းခံမှုစံနှုန်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.008€ သို့မဟုတ် 0.005â€
â—†တိကျမှုစက်ကိရိယာတွင်သည်းခံမှုစံနှုန်းသည် 0.0001€ နီးပါးရှိနိုင်သည်။
အသံ သိပ်မထွက်ဘူး မဟုတ်လား။ သို့သော် တိကျသော စက်ယန္တရားနည်းပညာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အနည်းငယ်သော အားကောင်းမှုက သင့်ထုတ်လုပ်သူအား စံ CNC သို့မဟုတ် လက်ဖြင့် စက်ပစ္စည်းဖြင့် မဖြစ်နိုင်သော ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။ အာကာသယာဉ်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ရာတွင်၊ တိကျသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီခြင်းသည် အသက် သို့မဟုတ် သေခြင်းကိစ္စ ဖြစ်နိုင်သည်။
မေး- တိကျသောစက်စက်ဖြင့် သင့်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သုံးခုမှာ အဘယ်နည်း။
A: Programming CNC စက်ကိရိယာများနှင့် manual စက်ကိရိယာများ။
CAD/CAM အပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြု၍ ထိရောက်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပရိုဂရမ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံနှိပ်များနှင့် အတိုင်းအတာများကို ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း။
အင်ဂျင်နီယာများ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်မာများကဲ့သို့သော အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း။
A- တိကျမှု ထုတ်လုပ်မှုကို အလွန်တိကျမှန်ကန်မှုဖြင့် တစ်ဦးချင်း အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းဟု သတ်မှတ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ လေယာဉ်ပျံနှင့် အမြောက်အမြားဖန်တီးရန် တူညီသောအစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ လေကြောင်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်း အပါအဝင် စက်အမျိုးမျိုးအတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။